केटाहरु केटीको कुन बानी मन पराउँछन् ? थाहा पाउनुहोस् ! - VOICE OF NEPAL
640 ??? ???????
कसैलाई उनको हेराई राम्रो लाग्ला, कसैलाई उनको फिगर राम्रो लाग्ला अथवा विभीन्न कुराहरु राम्रो लाग्ला । यस्तै उसले गर्ने केही क्रियाकलाप पनि राम्रो लाग्ला । अनि धेरैजसो केटीहरु यो लाग्छकी केटाहरु केटीहरुको फिगर मन पर्छ ।
केटीहरु सोच्छन् सबभन्दा पहिला केटाहरुले आफ्नो शरिरलाई हेर्छन र त्यसलाई नै मन पराउँछन । तर, ठ्याक्कै यो साँचो हैन् । केटाहरु केटीको अन्य आनीबानी मन पराउँछन केटीको शशिरलाई हैन् । अमेरिकाका युर्निभसिटी अफ नेब्रास्का– लिनकाँल्नका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययनमा केटाहरु, केटीको फिगर मात्र देखेर आकर्षित हुदैनन् । केटाहरुले केटीको निम्न कुरा देखेर केटाहरु मन पराउँछन् । पुरा पढ्नुहोस् ।